Rizqii halaala ykn haraama gochuun aangoo nama osoo hin ta’in aangoo Khaaliqaati (subhaanahu wa ta’aalaa) – Ifa Islaamaa
← Tafsiira Suuratu Al-Hadiid-Kutaa 2
Tafsiira Suuratu Al-Hadiid-Kutaa 3 →
Rizqii halaala ykn haraama gochuun aangoo nama osoo hin ta’in aangoo Khaaliqaati (subhaanahu wa ta’aalaa)
Posted on January 5, 2020 by sammubani
Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa Ar-Razzaaq erga ta’ee fi wantoonni dachi keessa jiran hundi kan Inni uumee erga ta’anii, namni hanga fedhe haa qabaatu wanta Rabbiin haraama godhee halaala gochuu hin danda’u. Ammas wanta Inni halaala godhe namni haraama gochuu hin danda’u. Sababni isaas, wanta tokko haraamaa fi halaala gochuun hojii Gooftaa qofa. Namni kana keessatti Isaan morkate, Gooftummaa Isaa keessatti shirkii hojjate jira. Namni wanta Rabbiin haraama godhe halaalessu ykn wanta halaala godhe haraama godhu keessatti osoo beeku itti gammadee makhluuqaaf ajajamee, Rabbii gaditti makhluuqa kana gooftaa godhatee jira. Fakkeenyaaf, Qeeysonni wanta Rabbiin haraamaa hin goone haraama godhu ykn wanta Rabbiin olta’aan halaalaa hin goone halaala godhu. Namni osoo beeku itti gammadee qeeysotaf ajajamee Rabbii gaditti qeeysota gooftaa godhatee jira. Qur’aana keessatti ni jedha:
One thought on “Rizqii halaala ykn haraama gochuun aangoo nama osoo hin ta’in aangoo Khaaliqaati (subhaanahu wa ta’aalaa)”